musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Peru Kuvhuna Nhau » Yakasimba M6.1 Earthquake Rocks Peru-Ecuador Border Dunhu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ecuador Breaking Nhau • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Munzvimbo idzodzo, kuzunza pasi kune njodzi kwakaitika nekwaniso yekukanganisa zvine mwero kukuvadza kwakanyanya kwezvivakwa nezvimwe zvivakwa.
Kudengenyeka kwakarova pedyo neSullana.
Kudengenyeka kwenyika kwakanzwika muPeru neEcuador
Hapana mishumo yevakakuvadzwa kana kukuvara kunowanikwa izvozvi.
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwakakunda padyo neSullana, Provincia de Sullana, Piura muPeru.
Kudengenyeka uku kwakarova pakadzika pakadzika kwemakiromita gumi pasi pechakakomba padhuze neSullana, Provincia de Sullana, Piura, Peru, nguva dzemasikati neChishanu 10 Chikunguru 30 na2021: 12 pm nguva yemuno. Kudengenyeka kwepasi kwakadzika kunonzwika zvakanyanya kusimba pane kwakadzika sezvo ivo vari padyo nepamusoro. Ukuru chaihwo, epicenter, uye kudzika kwekudengenyeka kunogona kudzokororwa mumaawa mashoma kana maminetsi anotevera seologistologist vachiongorora data uye kunatsiridza kuverenga kwavo.
Mishumo miviri yakapihwa neGerman Research Center yeGeosciences (GFZ) uye European-Mediterranean Seismological Center (EMSC) yakaratidza kudengenyeka kwenyika kwakakura 6.1.
Kubva pane yekutanga data kudengenyeka kwenyika, kudengenyeka kwacho kwaifanirwa kunge kwakanzwikwa nemunhu wese munzvimbo yeepicenter. Munzvimbo idzodzo, kuzunza pasi kune njodzi kwakaitika nekwaniso yekukanganisa zvine mwero kukuvadza kwakanyanya kwezvivakwa nezvimwe zvivakwa.
Kuzunza zvine mwero kungangoitika muSullana (pop. 160,800) iri 15 km kubva kune epicenter, Querecotillo (pop. 25,400) 16 km kure, Marcavelica (pop. 25,600) 18 km kure, Tambo Grande (pop. 30,000) 24 km kure, Piura (pop. 325,500) 28 km kure, San Martin (pop. 130,000) 29 km kure, Catacaos (pop. 57,300) 38 km kure, uye Chulucanas (pop. 68,800) 47 km kure.